AHOANA NY FANATSARANA NY PIP - AHOANA NO HANAOVANA - 2019
PIP famerenana ho an'i Python
Raha toa ka tsy mahafeno ny fepetra takian'ny rafitra misy ankehitriny ny solosaina PC, dia matetika izy ireo no miova. Na dia izany aza, misy mpampiasa sasany manatona kokoa an'io olana io. Raha tokony hividy, ohatra, mpandroso fandefasana lafo, aleony mampiasa mampiasa tolotra ho an'ny fifandimbiasana. Ny asa mahomby dia manampy amin'ny fanatanterahana ny vokatra tsara sy manoloana ny fividianana mandritra ny fotoana fohy.
Misy fomba roa ahafahana mamadika ny processeur - manova ny parameter amin'ny BIOS ary mampiasa rindrambaiko manokana. Anio dia te hiresaka momba ny fandaharanasa manerantany ho an'ny processed overclocking amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny faharetan'ny fiara fitaterana (FSB).
Ity programa ity dia tsara ho an'ireo mpampiasa manana maoderina maoderina fa tsy matanjaka loatra. Ankoatra izany, dia fandaharam-potoana tena tsara ho an'ny fandrosoana ny processeur i5 processeur sy ny processeurs hafa tsara, izay tsy mahatratra 100% ny herin'ny fahefana. Ny SetFSB dia manohana rindrambaiko maro, izany hoe, ny fanohanany dia tsy maintsy miankina amin'ny fisafidianana fandaharanasa ho an'ny fandroahana. Ny lisitra feno dia azo jerena ao amin'ny tranonkala ofisialy.
Ny tombony fanampiny amin'ny fisafidianana ity fandaharam-potoana ity dia ny fahafahana mamaritra ny fampahalalana momba ny PLL azy. Ny mahafantatra ny idirany dia ilaina fotsiny, satria raha tsy mitranga izany fandrosoana izany. Raha tsy izany, mba hahafantarana ny PLL, ilaina ny manala ny PC sy mikaroka ilay soratra mifanaraka amin'izany eo amin'ny chip. Raha afaka manao izany ny tompon'ny ordinatera, dia ao anaty toe-javatra sarotra ny mpampiasa finday. Miaraka amin'ny SetFSB, azonao atao ny mijery ny fampahalalam-baovao ilaina amin'ny programa, ary avy eo manohy ny fametahana.
Ny karazan-tsafidy rehetra amin'ny overclocking dia averina aorian'ny fanarenana Windows. Noho izany, raha misy zavatra tsy mety, dia mihena ny fahafahana manao ilay tsy mety. Raha heverinao fa fandaharan'asa tsy dia misy dikany izany, avy eo dia maika haingana milaza fa ny fitaovam-pifandraisana hafa rehetra amin'ny fanaovana asa fitetezam-paritra toy izany koa. Rehefa hita ny tokonam-baravarana efa hita, dia azonao atao ny mametraka ilay programa ho autoload ary ankafizo ny vokatra miteraka vokatra.
Ny ankamaroan'ny fandaharanasa dia "fitiavana" manokana ho an'ny mpandraharaha ho an'i Rosia. Tsy maintsy mandoa $ 6 isika mba hividianana ny programa.
Lesona: Ahoana no fomba hamerenana ny processeur
Ny fandaharana dia mitovy amin'ny teo aloha. Ny tombontsoa dia ny fisian'ny dikanteny Rosiana, miasa miaraka amin'ireo paikady vaovao alohan'ny hanavaozana azy, ary koa ny fahafahana mifampitohy amin'ny fahita matetika. Izany hoe, toerana izay ilana fahombiazana lehibe indrindra, midira amin'ny haavo faratampony. Ary aiza no mila mitaredretra - hampihenana ny fahita matetika ao anaty tsindry iray.
Mazava ho azy, tsy afaka milaza ny tombontsoa lehibe amin'ny fandaharam-potoana ny olona iray - fanohanana rindrambaiko marobe. Ny isa dia lehibe kokoa noho ny an'ny SetFSB. Noho izany, ny tompon'ny na dia ireo singa tena malaza aza dia mahazo làlana hivoahana.
Eny ary, avy amin'ireo minisitra - mila mamantatra ny PLL ianao. Azonao atao ihany koa ny mampiasa SetFSB ho an'ity tanjona ity, ary ny fametahana ny CPUFSB.
Ireo tompon'ireo ordinatera taloha sy efa tranainy indrindra dia maniry indrindra ny mametaka ny PC, ary misy koa ny programa ho azy ireo. Efa antitra, fa miasa. SoftFSB - fandaharanasa toy izany izay ahafahanao mahazo ny lanjany indrindra amin'ny haingam-pandeha. Ary na dia manana reny ianao, ny anarana izay hitanao voalohany indrindra teo amin'ny fiainanao dia misy ny vahaolana avoakan'ny SoftFSB.
Ny tombony amin'ity programa ity dia ny tsy fisian'ny fahalalana ny PLL. Na izany aza, mety ilaina izany raha tsy voatanisa ny reny. Ny rindrambaiko dia miasa toy izany eo ambanin'ny Windows, ny autorun dia azo alamina amin'ny programa.
Minus SoftFSB - ny antontan'isa dia antikazo tena izy amin'ny fanesoana. Tsy manohana azy intsony ilay mpandrindra, ary tsy ho afaka hamita ny PC ianao.
Nambaranay momba fandaharan'asa telo lehibe izay ahafahanao manokatra ny tanjaky ny processors ary mahazo fampiroboroboana. Farany, tiako ny milaza fa zava-dehibe ny tsy fisafidianana fandaharanasam-pandrenesana, fa koa mba hahafantarana ny sombintsombiny amin'ny fanodikodinam-bola. Manoro hevitra izahay mba hahalalanao ny tenanao amin'ny lalàna rehetra sy ny vokany mety hitranga, ary alao maimaim-poana ny programa amin'ny fametahana ny PC anao.